Izindatshana zika-Alicia Navarro zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge U-Alicia Navarro
U-Alicia Navarro uyi-CEO futhi Co-founder of I-Skimlinks, ipulatifomu yokwenza imali yokuqukethwe esiza amawebhusayithi ukuthi aklonyeliswe ngenhloso yokuthenga eyenziwe kokuqukethwe kwabo. Ngaphambi kokwethula ama-Skimlinks, usebenze iminyaka engaphezu kwengu-10 esungula futhi ethula izinhlelo ezisebenza ngamaselula nakwi-inthanethi e-Australia nase-UK. Kusukela ngo-2007, u-Alicia usekhulise inkampani yaba ngabasebenzi abangaphezu kwama-85 kuwo wonke amahhovisi eLondon, eSan Francisco naseNew York City.
Uhlu lokuhlola lomhlinzeki wedatha weSklinklinks - Ukubuza imibuzo efanelekile
NgoLwesibili, ngo-Mashi 15, i-2016 U-Alicia Navarro
Kuze kube muva nje, abathengisi bedijithali kanye nabachwepheshe be-ejensi yezikhangiso ababefuna ukwenza ukuthengwa kwezikhangiso okuhleliwe babhekene nesimo sesimo sedatha emnyama. Iningi alibona onjiniyela noma ososayensi bedatha, futhi bekufanele bathathe okweqile ukukholwa futhi bathembe izimangalo zomhlinzeki wedatha mayelana nekhwalithi yedatha, babuyekeza imiphumela ngemuva kokuqaliswa - nangemva kokuthengwa okwenziwe. Kepha yini okufanele abathengisi nezinhlangano babheke kumhlinzeki wedatha? Bangabona kanjani ukuthi iyiphi